यस्तो राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती ! - Himalayan Kangaroo
यस्तो राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती !
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ कार्तिक २०७४, शनिबार ०२:०६ |
हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् ।
प्राय हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु । तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस् । यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ । अर्थात राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
सुन्दर श्रीमती पाउनुलाई भाग्यसँग जोडिन्छ । र त्यसआधारमा तुला राशि भएका व्यक्ति सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् ।
तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै इमोशनल र समझदार हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्तिको प्रमुख विशेषता हो कि यीनिहरु आफ्नो पार्टनरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुन्छन् ।
यस्तो राशि भएका व्यक्ति केटीको चाहना बुझ्न माहिर मानिन्छन् । कुनै महिलालाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा कर्कट राशि भएका पुरुषले सजिलै बुझ्न सक्छन् । साथै केटीलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि कर्कट राशि भएका पुरुषहरु धेरै सजक हुन्छन् ।
यो राशि भएका धेरै व्यक्ति प्रेम विवाह (लभ म्यारिज) गर्छन् ।
मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै रोमान्टिक मानिन्छन् । आफ्नो पार्टनरलाई सरप्राइज दिन उनीहरुलाई विशेष ज्ञान हुन्छ । उनीहरु अचानक खुसी बनाउन पनि माहिर हुन्छन् । मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै ‘क्यूट’ र रोमान्टिक व्यक्तित्वको हुन्छन् । जसकारण पनि केटीले यस्ता राशि भएका पुरुषलाई मन पराउँछन् ।
Previousयस्तो छ भाइटीकाको कथा
Nextअनुहार हेरेरै थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव
सौर्यमण्डल बाहिर भेटिए तीनवटा ग्रह, जीवनको सम्भावना
८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०८:३२
गलामा सर्प राखेर साथीको बिहेमा नाच्दा गयो ज्यान
३० असार २०७४, शुक्रबार ०७:२३
बेनलेस चिकेन भन्दै मुसाको मासु बेच्दै
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०१:१९